Root Garcinia cambogia budada laga qaado (90045-23-1) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / Garcinia cambogia soosaarida budada
Rating: SKU: 90045-23-1. Category: Xabbad dufan leh
AASraw wuxuu ku yaalaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qoto-dheer oo la yiraahdo Cambogia cambogia (90045-23-1), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Cambogia Garcinia budada ah waxaa laga sameeyaa miraha tamarind waxaana loo isticmaalaa dhowr waxyaalood oo dheeri ah oo lagu iibiyo budo cayriin oo miisaan-lumis ah. Garcinia Cambogia waa geed ku soo caan baxay Hindiya iyo Aasiya qarniyo badan. Garcinia Cambogia waa bocor yar oo sida miraha ah oo hadda uun ka heleysa cunno-qabatinka reer galbeedka iyo khubarada cuntada ee isticmaalka dabiiciga ah.
Cambogia Garcinia ayaa laga soocaa video budada
Raw Garcinia cambogia caleemaha aasaasiga ah
Name: Cambogia Garcinia budada ah
Qaaciddada Molecular: C16H21BrClNO4
Color: Botanicals, Powders iyo Waxyaabaha, Waxyaabaha Dabiiciga ah
Cabbogiinka cagaaran ee bambogia waxaa laga dhalaalaa budada miisaanka lumista miisaanka
Cambogia Cambogia ayaa ka soo baxa budada (CAS 90045-23-1), HCA, Cambogia Garcinia, Gambooge, Malabar Tamarind, Goraka, Brindle Berry, Brindall Berry
Raw Garcinia Cambogia laga dhigo budada loo isticmaalo
Haddii aad go'aansato in aad wali rabto inaad tijaabiso qaadashada GC miisaanka lumay ama faa'iidooyinka kale, waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato qiyaasta talooyinka ee alaabada leh HCA:
(1) Daraasadaha la adeegsanayo GC waxay isticmaaleen noocyo kala duwan oo qiyaaso ah, meel kasta oo laga bilaabo hal garaam ilaa 2.8 garaam maalin kasta. Qiyaasaha caadiga ah ayaa la istcimaalaa inta udhaxeysa 250-1000milligrams maalintii.
(2) Muddadii waxbarashadu waxay si kala duwan u kala duwan tahay, iyada oo u dhexaysa isticmaalka GC inta u dhaxaysa laba ilaa toddobaad 12 waqti.
(3) Qiyaasta ugu fiican ee HCA ayaa weli aan la aqoon. Ma cadda haddii qiyaasta HCA-da sareeya xitaa macnaheedu yahay bioavailability sare ee HCA markii uu cunay.
(4) Waxaa u muuqda in uu yahay mid iswaydaarsi u ah inta u dhaxeysa qiyaasta HCA iyo miisaanka jidhka oo lumay, taasoo micnaheedu yahay qiyaaso sarreeya waxoogaa saameyn ah.
(5) Cambogia Garcinia wuxuu sii ahaanayaa midka ugu badan ee loo adeegsado daraasadaha bixinta HCA, si kastaba ha ahaatee ha ka soo baxo GC, HCA ayaa sidoo kale laga heli karaa qaybo ka mid ah dhirta Hibiscus subdariffa.
(6) Sababtoo ah daraasadaha intooda badani waxay baaritaan ku sameeyeen saameynta GC-da ee qiyaastii siddeedii toddobaad ee la soo dhaafay, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in ay ugu dambeyntii tahay "waqti gaaban oo lagu qiimeeyo saameynta HCA ee miisaanka jirka."
Si aad uga fogaato dhinaca nabdoonaanta, iska ilaali inaad iibsato cambogia "formula" ama "kudheerta isku dhafka", oo laga yaabo inay ku fashilmaan inay soo sheegaan dhammaan waxyaabaha kale ee ay ku jiraan ama heerarka saxda ah ee HCA. Noocyo badan oo macaamiisha ah ayaa waxaa sameeya kuwa soo saaraha ah oo isticmaala kaliya jajabka maaddooyinka firfircoon ama qiyaasta caadiga ah si ay u ilaaliyaan qiimaha. Had iyo jeer akhri sumadaha oo raadi ereyada "cambogia sirta ah" (CAS 90045-23-1) "iyo" hydroxycitric acid (ama HCA) "(waa inay ahaataa mid ku dhawaad ​​50 boqolkiiba 60 boqolkiiba alaabta). Haddii aad iibsato isku dhafan oo aad aragto qayb ka mid ah walxaha ku qoran liiska la'aanteed, taasi waxay noqon kartaa calan cusub oo aanad garanayn waxa aad helayso.
Digniinta Cambogia ee Raw Garcinia budada ah
Inkastoo qaar ka mid ah dadka ay sheeganayaan inaysan la kulmin waxyeellada soo gaarta marka la isticmaalayo isticmaalka GC, kuwa kale waxay leeyihiin khibrado kala duwan. Halkan waxaa ku jira hal xisaabiye oo dhib ah oo ku saabsan isticmaalka bambogia bambogia oo laga yaabo in aanad maqlin: Waxaa lagu daraa ugu yaraan dhowr bukaan ah oo isbeddelaya cusbitaalka oo leh qaliin beerka oo u baahan baahida beerka ee degdegga ah.
Maqaallo 2016 ah oo ay daabacday Xarunta Cudurka Qaaxada ee Mayo Clinic ayaa sheegaysa in malaayiin Maraykan ah ay si joogto ah u isticmaalaan dhirta dhirta, inta badan kiniinka kiniiniga ah, laakiin aan ka warqabin saameyntooda. Daawooyinka miisaanka oo badan ayaa keena khataro qarsoodi ah oo ay la xiriiraan "hepatotoxicity iyo dhaawaca beerka oo daran."
Marka laga hadlayo cambogia garcinia, si sahal ah ayaa loo isticmaali karaa oo aan si fiican loo xakamayn karin. Warshadaha qaarkood waxay ku talinayaan qaadashada qiyaaso badan dhowr jeer maalintii. tusaale ahaan 30 illaa 60 ka hor cunto kasta oo siddeed illaa 12 usbuuc toosan. Marka laga reebo waxyeelada beerka, saameynaha kale ee cambogia ee caga xanuunka ee dhici kara waxaa ka mid ah:
• noqoto mid liita ama daciif ah
• daal iyo maskaxda maskaxda
• finan maqaarka ah
• kor u kaca hargabka / hawlaha difaaca ee hooseeya
• Afka qalalan iyo neefta xun
• arrimaha dheefshiidka sida lallabbo, cunto cunid ama shuban
Wax kale oo laga fiirsanayo GC waa liiska dheer ee isdhexgalka caafimaadka / daroogada. Dad badan waa in ay ka fogaadaan cambogia garcinikada sababta oo ah waxay saameyn kartaa daawooyinka kale, uurka, heerarka nafaqada, sonkorta dhiigga iyo wixii ka sii badan. Cambogia Garcinia waxay udhacdaa si xun ula xiriirta:
• Uurka iyo naas-nuujinta
• kiisaska hadda jira ee beerka ama kelyaha dhaawac
• daawooyinka loo qaado si loo xakameeyo neefta iyo xasaasiyadda
• daawooyinka sonkorowga iyo insulin
• Qaadashada birta (badanaa ay qaadaan dadka qaba dhiig yari)
• Daawooyinka xanuunka
• Daawooyinka loo isticmaalo in lagu xakameeyo jirrooyinka maskaxda sida walaaca iyo niyad-jabka
• Daroogooyinka dawada ee ka hooseeya kolestaroolka
• Daawooyinka dhiigga khafiifiya (sida warfarin)
Daawada budada ah ee bucinosa waxaa laga sameeyaa miro tamarind waxaana loo isticmaalaa dhowr waxyaalood oo lagu iibiyo maaddo culus oo culus.
Cambogia Garcinia (GC) waa mid yar, miro boombal ah oo ku koraya Koonfur Asiya iyo Hindiya. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee firfircoon ee laga helay ciriiriga cambogia waa hydroxycitric acid (HCA), taas oo cilmi-baarisyada qaarkood soo jeedin karaan in dadka qaarkood lumiyo miisaanka.
Cambogia dib u eegida Garcinia, natiijooyinka cilmi baarista iyo macaamilka luminta lumay ayaa isku dhafay in ay yiraahdaan ugu yaraan. Ilaa hadda faaiidada ugu wanaagsan ee loo isticmaalo isticmaalka cambogia garciniyada waa awooda lagu kordhinayo miisaanka luminta. Sheegashooyinka kale ee sida badan loo sameeyo ee ku saabsan saameynta cambogia ee qanjirada waxaa ka mid ah:
• lumitaanka cunto xumo ama aad ka yar tahay rabitaanka inaad wax ka cuntid intii caadiga ahayd
• Cunto yarida cuntada nafaqada leh, sida sonkorta qabatinka
• Xaalad fiican oo wanaagsan (oo ay ku jirto dareen farxad leh, xoog badan oo daal badan)
• Tamarta iyo xoogsaariddu kordhiso
• Heerarka sonkorta dhiiga oo xasilan
• dhaq-dhaqaaqa mindhicirka
• Dhibaatooyinka wadajirka ah ee hoos u dhaca
• Heerarka kolesteroolka la hagaajiyey
• rabitaan xoog badan oo jir ahaaneed firfircoon
Inta badan sheegashooyinka kor ku xusan ma aysan taageerin daraasaadka sayniska, si kastaba ha ahaatee qaar baa haysta. Aynu dib-u-eegno faa'iidooyinka cambogia ee garcinjka ah ee dhab ahaantii haysto qaar ka mid ah mudnaanta iyo u muuqda in ay si wax ku ool ah u habboon yihiin.
1). Dhimashada Miisaanka
Daraasadaha qaarkood waxay ogaadeen in cambogia garcinka, dhab ahaantii, ay awood u yeelan karto in ay ka caawiso yaraanta luminta fataha, oo lagu daray qaar ka mid ah dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee kor ku xusan, inkastoo waxtarkeeda uu aad u xoogan yahay ama mid joogto ah. Tusaale ahaan, cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in HCA ay ka shaqeyso adoo joojinaysa enzyme gaar ah oo loo yaqaan 'adenosine triphosphate-citrate-lyase, kaas oo gacan ka geysta sameynta unugyada baruurta. Laakiin daraasadaha isbarbardhigaya saamaynta GC ee xakamaynta waxay ogaadeen in kaliya ay kordhin karto miisaanka oo keliya hal ama laba rodol celcelis ahaan.
Natiijooyinkani waa dhab ahaan waxa cilmi-baarayaasha lagu daabacay Joornaalka Caymiska ee 2011. Marka la barbardhigay dadka qaata cambogia bambogia waxay udubaystaan ​​budada kuwa aan ku jirin, farqiga miisaanka ayaa aad u yaraa (celcelis ahaan qiyaastii laba rodol). Waxaa intaas dheer, xitaa suurtagal maaha in la garto in GC uu si toos ah masuul uga ahaa miisaanka dheeraadka ah ee lumay.
Falanqaynta miisaanka ayaa dib loo eegay natiijooyinka 12 ee kala duwan ee ku lug leh GC oo muujiyay farqi yar oo isbeddel ah oo miisaankiisu hoos u dhacay maaddaama isticmaalka alaabooyinka cambogia ah ee lagu magacaabo HCA wax yar ka yar isticmaalka koontada. Hase yeeshee, falanqaynta ayaa sidoo kale ogaatay in daraasadaha qaarkood ay muujiyeen saameeyeyaasha dheef-shiid kiimikaadka ("munaasabadaha xun ee caloosha") waxay ahaayeen labo jeer guud ahaan kooxaha HCA marka la barbar dhigo cirbadda.
Natiijooyinka ka soo baxa daraasado miisaan kala duwan oo ku lug leh GC ayaa aad isugu qasan. Mid ka mid ah daraasadda miisaaniyadda ayaa muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada dufanka ee kooxda HCA marka la barbar dhigo cirbadda, laba baadhitaan ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimi dufanka dufanka / dufanka subagga / dufanka guud ee dufanka ee HCA marka la barbar dhigo ciribta, laakiin laba daraasadood oo kale ma helin farqi weyn oo u dhexeeya HCA iyo placebo. Daraasad lagu daabacay Jariidada Ururka Caafimaadka Maraykanka ayaa ogaatay in GC loo isticmaalo toddobaadyada 12 (qiyaasta milligaraaminta 1,500) "ku fashilmeen in ay soo saaraan culays weyn oo culus iyo khasaare weyn oo dufan ka baxsan oo lagu arkay xayeysiis."
Dhamaystirka falanqaynta macaamilka ee ku saabsan cambogia garcinka? Cilmi-baarayaashu waxay soo koobeen natiijooyinkoodii iyagoo ku dhahaya "baaxadda saamaynta ay yar yahiin, xiriirka bukaan-socodka lama hubo. Dhibaatooyinka mustaqbalku waa inay noqdaan kuwo aad u adag oo si wanaagsan loo soo sheego. "Qadka hoose ayaa ah in haddii aad ku dhibtoonayso inaad miisaan culus tahay, GC waxay u badan tahay inuusan noqon jawaabta, sida laga soo xigtay daraasadda tijaabada ah iyo kormeerka.
2). Hoosudhaca cuntada
Daraasaduhu waxay sidoo kale soo jeediyeen in ay macquul tahay in HCA laga helo cambogia garcinia ay ka caawin karto inuu yareeyo cunsuriyada qofkastoo uu kordhinayo soosaarista serotonin neurotransmitter, taas oo la xidhiidha dareen xasillooni iyo farxad leh - sidaas darteed, mararka qaarkood xakamaynta cuntada, hoos u dhigista iyo rabitaanka hoos u dhaca raashinka . Daraasaadka xayawaanka ayaa muujinaya inay sidoo kale gacan ka gaysan karto kordhinta kharashka tamarta.
Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, taasi ma aha kiiska oo dhan dadka oo dhan, waxaana jira siyaabo kale oo aan halis lahayn oo lagu maareyn karo cunto xumidaada iyo kor u kaca waxsoosaarka serotonin (sida cunista cuntooyinka isku dhafan ee cuntooyinka borotiinka iyo karbooyinka caafimaad qabta waqtiyada joogtada ah maalinta oo dhan).
3). Cholesterol hoose
Waxaa jira taageero qaar ka mid ah cambogia garcinka oo awood u leh inuu hagaajiyo heerarka kolesteroolka iyo hoos u dhiga triglycerides sare. Waxa kale oo laga yaabaa inay awoodaan inay ku caawiyaan kor u kaca "kolorol" wanaagsan "HDL". Ammaan maaha qofkii hore u qaadanayay daawooyinka saameynaya kolestaroolka, si kastaba ha ahaatee, iyo saameynteeda uma muuqdaan inay aad u kalsoon yihiin ama xooggan yihiin.
Daraasaduhu waxay ogaadeen in GC-da "wax saameyn ah ku yeelan mabaadii'da anthropometric, REE, triglycerides ama glucose" laakiin waxa laga yaabaa in ay saameyn yar ku yeelato hoos u dhigidda kolestaroolka. Ku xeeldheer in ay jiraan siyaabo kale oo dabiici ah oo loo hagaajin karo heerarka kolesteroolka, oo ay ku jiraan jimicsi iyo cunista cuntooyinka cuntooyinka ka badan cuntooyinka dhirta sare leh sida veggies, nuts, miraha iyo digirta.
4). Sonkorta Dhiigga ee la joojiyay
Ugu dambeyntii, waxa ku saabsan saamiga CG ee ku saabsan heerarka sonkorta dhiigga? Caddeynta qaar ayaa jirta oo muujinaysa in cambogia qanjiraha ay ka caawin karto ilaalinta sonkorta dhiigga iyadoo la hagaajinayo sida unugyada sonkorta loo qaado (sonkorta) in loo isticmaalo tamar. Hal dariiqo oo laga yaabo inay hagaajiso miisaanka luminta waa iyada oo la xakameynayo xayawaanka alfa amylase enzymes, isbeddelka xiidmaha alfa glucosidase iyo isbeddelada kudubka cad-duurka. Tani waxay awood u yeelan kartaa in ay bedesho sida carbohydrateska loo metelayo.
Tani waxay suurtagal noqon kartaa in jirkaagu ka jawaabo insulin ka fiican, inkastoo ay kordhin karto khatarta ah in dadka qaarkiis ay qabaan heerka sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda. Haddii aad qabtid taariikhda sonkorta dhiigga, waxaad tahay wax calaamado ah, sonkorow ama qaadashada daawooyinka isbeddelaya saameynta insulin, GC waxay ka dhigeysaa sonkorta dhiiggaaga inay hoos u dhacdo. In kasta oo tani aysan u muuqan in ay dhacdo qof kasta oo qaata GC, waa wax kale oo la tixgeliyo iyo wax kale oo laga hadlo dhakhtarkaaga.
Cambogia Garcinia ka samee budada budada ah (CAS 90045-23-1)
Raw Garcinia cambogia laga soocayo badeecada Suuq-geynta
Sida loo soo iibsado bambogia cambogia laga soo qaado budada (CAS 90045-23-1) laga bilaabo AASraw